Iyo Ibex 35 ichasvika riini iyo 8000 poindi? | Ehupfumi Zvemari
Iyo Ibex 35 inosvika riini iyo 8000 poindi nhanho?
European Central Bank (ECB) yakaratidzazve kuti yakagadzirira kubatsira hupfumi hweMunharaunda munguva dzakadai sedzino. Nekuti zvirizvo, iyo yemari agency yakabvumidza chirongwa chitsva chechikwereti chemabhangi kuitira kuti ive nechokwadi chekudikanwa kwemari. Kusvika padanho rekuti danho rayo rinonyanya kushamisa rave rekudzikisa mibairo yemitero paTLTRO III yezvikwereti zvenguva refu -1%. Ichokwadi chinogona kukurudzira misika yemari kubva zvino zvichienda mberi uye kuti kunyanya inogona kutora Ibex 35 kumatanho emapoinzi mazana masere, chinova ndicho chinangwa chayo chinotevera kusvika.
Pamitengo iriko pamusika wemari munyika medu, hapana mubvunzo kuti chinotevera chinangwa cheIbex 35 ndechekusvika padanho remapoinzi mazana masere. Asi iri danho rinokwanisika here mune yakasarudzika index yeSpanish equities? Kusvika pano kunoreva kuwedzera kuonga kweanosvika gumi muzana uye nekudaro kwaizoda tarisiro yakawanda pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Kunyangwe iri yakaoma kwazvo kuzadzisa munguva pfupi, haina kure kurerwa mune yepakati uye kunyanya yakareba. Hazvishamise kuti, ndeimwe yematsigiro akakurumbira ayo indekisi irinayo panguva ino. Naizvozvo, iro danho rinofanirwa kunyatso tariswa kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti kushaya simba kwevakadzi veEurope chinhu chinowanzoenderana nedudziro yavo. Iko, kufamba uku kunofanirwa kuperekedzwa neyakajeka data iyo yatinowana yakaoma kwazvo mumamiriro azvino. Ehezve, chinokonzeresa kuzadzisa izvi zvinangwa chichava kuwanikwa kwemushonga kana mushonga wekurapa coronavirus. Mune ino kesi, misika yemasheya inogona kuve neakakosha kudzokorodza uye kuti mune mamiriro ekuenzana munyika medu zvinogona kutungamira kumazana masere nemakumi matatu mapoinzi kana kutonyanya kudzvanywa matanho. Uye ichi chokwadi chinogona kuitika chero nguva uye nenzira isingafanoonekwi nevashambadzi vadiki nepakati.
1 Zvinodikanwa zvemapoinzi mazana masere
2 Zvikamu zvinomuka
3 Mazinga ekuderera
4 Dzokera kune zvakajairwa
5 Iko kukosha mutsetse kupatsanura system
6 Iyo yekuchengetedza renji yemutengo wekukosha
7 Yakabatanidzwa nenguva dzehupfumi
Zvinodikanwa zvemapoinzi mazana masere
Chimwe chezvinodikanwa kuti usvike aya mazinga emitengo mumusika weSpanish wemusika, sezvatakataura, ndiko kuti ndiko kuchave kuwanikwa kwechirwere kana mushonga wekurapa iyo coronavirus. Ichi ndicho chinodikanwa chinofanirwa kuzadzikiswa mune akawanda emisiyano inoitwa nevanoongorora mumisika yemari. Kunyangwe chiri chinhu chinoshamisira icho chinomisikidzwa nevamiriri vakasiyana vemari. Naizvozvo, zvakaoma kwazvo kuvashambadziri vadiki nepakati kuti vafanoona pavanogadzira mashandiro avo kuti vawane pundutso mukuchengetedza kwavo. Pasina kukwanisa kushandisa nzira zhinji dzekudyara, zvirinani munguva pfupi kubva pamatanho azvino.
Nepo kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti zvimwe zvezvinodikanwa zvechiitiko ichi ndezvekuti zviitiko zvehupfumi zvidzokezve munyika medu. Chiitiko chinogona kuiswa mukushanda muna Chikumi chinotevera, sehurumende yenyika yedu yaongorora. Kune rimwe divi, inofanirwa kuona kuti ndeipi mhinduro kune mutengi maererano nevashandisi uye kuti inogona kukanganisa zvakanyanya shanduko yeinosarudza indekisi munyika yedu. Kunyanya, kusvika pamatanho e8000 mapoinzi, inova chikamu chekutanga chekudzoreredza mumusika wechitoro wenyika mukuongorora kwehunyanzvi.
Kana iyo Ibex 35 ikangosvika padanho rezviuru zvisere, zvichave zvakakosha kuti uongorore kuti ndedzipi zvikamu zvepamusika wemasheya zvinogona kunyatsopindura mamiriro aya mumisika yemari inowaniswa. Zvakanaka, musimboti, vakanyanya kurangwa kusvika parizvino ndivo vanogona kuzviita mune ino nyowani uye fungidziro mamiriro anoratidzwa muIbex 8000. Kuchengetedzwa, kwakadai sedenderedzwa, kubhengi uye kunyanya avo vezororo nerekushanya. Kusvika padanho rekuti ivo vachazokwanisa kutsvaga avo marongero zvishoma kubva panguva iyoyo munguva. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti ivo vanokwanisa kuita kukwikwidza munzvimbo dzekutengesa dzinodarika gumi% uye nekudaro zviri nyore kuita purofiti munguva dzino dzekuongorora.
Kune rimwe divi, zvinofanirwawo kusimbiswa kuti imwe yemaitiro anogona kuita zvirinani mumavhiki anotevera ndeayo anomiririrwa nemakambani ekuvaka. Iko kune kukosha kwakadai seACS iyo yakabva mukukosha zvishoma pasi pe40 euros kusvika ku12 euros mumazuva mashoma. Kunyangwe mune iyi nyaya chaiyo, yakatopora kusvika kumatanho ayo achiri asingagutsikane kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati nepakati apo zvikamu zvaro zvinotengwa pamadhora anodarika makumi maviri. Chinhu chakafanana chaizvo nezvakaitika mazuva ano kune mamwe makambani akabatanidzwa mune rimwe rematunhu akamiririra emari munyika medu.
Hapana mubvunzo kuti chimwe chinhu chinokonzeresa shanduko yeakasarudzika indekisi yenyika, Ibex 35, inotorwa kubva kumatunhu ekuderera kwehupfumi hwenyika yedu. Nekuti zvirizvo, chiitiko chayo chichava chidiki pane chakakosha kubva panguva ino chaiyo uye nekudaro inogona kuve mumwe wevabatsiri vakakura veiyi nyowani yezvehupfumi iyo inopihwa kwatiri mumwedzi inotevera. Uye kubva pane ino maonero, hapana mubvunzo kuti zvikamu zvavo zvinogona kudzikisira mumisika yemari mumwedzi iri kuuya kana kunyangwe mune akanakisa kesi mumakore anotevera. Kuve mumwe wezvikamu zvekutarisa mukuzvibatanidza mune yedu inotevera yekudyara portfolio. Kubva kune chero mhando yeprofil mune vashoma nepakati varimi, kubva kune vane mwero kusvika kune vane hukasha uye vasina chavanosiira chero mhando.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti kuitira kuti uve wakadzikama kubva ikozvino zvichienda mberi, makambani ane nhoroondo iyi yebhizinesi haafanire kunge asipo pamasheya portfolio. Kune mamwe ane mimwe mitsara yakasiyana-siyana yebhizimisi inobatsira kuchengetedza nzvimbo kubva pakutenga-kunze nevashandisi vezvitoro. Nechokwadi chaicho chekuti pakupedzisira tichazotanga kubva mukufamba uku mumabhegi. Sezvo iri pakupera kwezuva izvo zvinosanganisirwa nekirasi iyi yekushanda munguva dzakaoma kwazvo dzemisika yemari muhuwandu. Nenjodzi yakakura kudarika dzimwe nguva dzezvakaitika nekuti mune pfupi pfupi hapana maitiro anonyatso kusiyaniswa kubva kune chero mhando yekutaura mune iyi hukama hwehukama nenyika inogara yakaoma yemari.
Dzokera kune zvakajairwa
Ehe, chichava chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo kuti iyo Ibex 35 ikwanise kusvika padanho rakakosha remapoinzi zviuru zvisere. Saka kuti nenzira iyi, mamwe matanho anodikanwa anokwanisa kutariswa kubva mumwedzi yezhizha uye ndicho chimwe chezvinangwa zvakanyanya zvevashambadzi vadiki nepakati. Mukati meichi chirevo chizere, zvichave zvakakodzera kufunga nezvemazuva ano pazvinenge zvakakosha kuti udzokere kumamiriro ezvinhu pamberi pekuwedzera kwecoronavirus. Panguva iyo misika yequity ingangonzwa izvozvi kuti varimi vatora mukana wekukwira kutengesa nzvimbo dzavo pamusika wemari. Muchikamu chepamusoro chegwara rakagadziriswa mushure mekudzokororwa kwakaunza iyo inosarudzika indekisi yemusika wemasheya munyika medu kusvika pamatanho e8000 mapoinzi.
Mukati meichi chiitiko chakajairika, kuti kuwedzerwa kuve kwakavimbika, hakuzovi nemamiriro ezvinhu ari nani ezvinhu kuti zvidzokere pane zvakajairwa, zvirinani maererano nekudzoka kubasa nekugadzirwa kwehupfumi. Kana zvisiri nenzira iyi, musika wemasheya unokwira hauzove unowirirana zvakakwana kuti utarise tsika yekudzikira iyo yakatanga mumavhiki ekutanga aKurume yakundwa. Nekuti zvakanyanya izvo rebound zvakagadzirwa zvine kusimba kukuru. Iko isingakwanise kukanganikwa kuti pasi rose, European uyezve kuderera kwespanish kunopinda zvizere mune panorama yemakambani akanyorwa pamisika.
Uye chinodiwa ndechekuti zvakajairika pabasa ndezvechokwadi uye nenzira iyi, iyo Ibex 35 inogona kutora iyi mamiriro mukuenderana kwemitengo yayo. Iine mukana wekuti inogona kutungamirwa kumatanho epamusoro pane ayo akasimudzwa muchinyorwa chino. Izvo, shure kwezvose, chimwe chezvinangwa zvakanyanya zvevadiki nepakati varimi kubva zvino zvichienda mberi.
Iko kukosha mutsetse kupatsanura system
Iyo Value Line Investment Survey ingangove inonyanya kuzivikanwa neyakavhurika Timeliness chinzvimbo system iyo inosvika angangoita 1.700 masheya achienzaniswa nevamwe emitengo yekuita pamwedzi mitanhatu kusvika gumi nemiviri, uye Safety ™ Iyo Value Line technical Ranking yakagadzirirwa kufungidzira kufamba kwemitengo yemitengo pamusoro pemwedzi mitatu kusvika kumatanhatu. Muchiitiko chimwe nechimwe, masheya akayerwa kubva pa12 kusvika pa1, uye 5 iri iyo yepamusoro chiyero.
Mhando yeiyo Mukana Kukosha Mutsetse. Kubva pamaonero aya, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti chinhanho chemutsetse wekukoshesa maererano nenguva yakaenzana chinoyera mashandiro anoita mitengo yemakisheni anosvika chiuru nemazana manomwe mukati memwedzi mitanhatu kusvika kumwedzi gumi nemaviri pachiyero chinonzwisisika chinobva pa1.700 (pakakwirira ) kusvika ku12 (mashoma). Zvikamu zvemutengo wekukoshesa mutsetse weiyo nguva zvine hungwaru zvinosanganisira zvinhu zvakaita seyegumi-gore maitiro eanowanikwa uye nemitengo yakaenzana, mibairo ichangoburwa uye shanduko yemitengo, uye kushamisika kwekuwana.
Yese data ndeyechokwadi uye inozivikanwa. Chirongwa chemakomputa chinobatanidza zvinhu izvi kuita fungidziro yemutengo wekushandurwa kwechitoro chimwe nechimwe, zvichienderana nezvimwe zvese zvakaiswa mumatura kwemwedzi mitanhatu kusvika gumi nemiviri inotevera. Iyo 12-share Value Line Universe inomiririra angangoita 1.700% yemusika wemari yezvinhu zvese zvakatengeswa pamabhizimusi ekuUS.
-Rank 1 (Yakanyanya Kumusoro): Aya masheya, seboka, anotarisirwa kuve anonyanya kuita zvine hukama neiyo Kukosha Mutsetse wepasi rose pamwedzi mitanhatu kusvika kugumi nemiviri (zvikamu zana).
-Rank 2 (Pamusoro PeAvhareji): Aya masheya, seboka, anotarisirwa kuita zvirinani kupfuura avhareji yemitengo yehama (mazana matatu emasheya).
-Rank 3 (Avhareji): Aya masheya, seboka, anotarisirwa kuve nemitengo yemitengo inoenderana neiyo Value Line universal (angangoita mazana mana emasheya).
-Rank 4 (Pazasi Avhareji): Aya masheya, seboka, anotarisirwa kuve nemutengo wekuita pazasi peavhareji (angangoita mazana matatu emasheya).
-Rank 5 (Minimum): Aya masheya, seboka, anotarisirwa kuita zvakanyanyisa mumitengo yehukama (zvikamu zana).
Shanduko munzvimbo yemukana dzinogona kukonzerwa ne:
-Mitsva yekuwana mibairo kana fungidziro yekambani.
-Chinjo mumutengo wekufamba kwechikamu maererano neanenge mazana chiuru nemazana manomwe emigove yasara yebhuku racho.
-Misiyano muzvikamu zvine hukama zvemamwe masheya.
Iyo yekuchengetedza renji yemutengo wekukosha
Chikamu chechipiri chekudyara chinzvimbo cheChengetedzo chakapihwa neValue Line kune yega yega yematanho anosvika chiuru nemazana manomwe. Iyi nhanho inoyera huwandu hwese hwechitoro maererano neanenge 1.700 masheya akasara. Iyo inotorwa kubva kuStock's Stability Index uye yekambani Simba rezveMari reSimba, ese ari maviri anoratidzwa mukona yezasi yekurudyi rwepeji rega rega muKukosha kweRine Line ratings nemishumo. Kuchengetedzwa ratings zvinopihwawo pachiyero kubva pa1.700 (chepamusoro) kusvika pa1 (pasi) seinotevera:
-Rank 1 (Kumusoro-soro): Aya masheya, seboka, ndiwo akachengetedzeka akachengeteka, akatsiga uye asina njodzi kuhukama maererano neiyo Kukosha Mutsetse wepasi rose.
-Rank 2 (Pamusoro peAvhareji): Aya masheya, seboka, akachengeteka uye haana njodzi zvakanyanya kupfuura mazhinji.
-Rank 3 (Avhareji): Izvi zviito, seboka, zviri zvengozi uye chengetedzo.
-Rank 4 (Pazasi Avhareji): Aya masheya, seboka, ane njodzi uye haana kuchengetedzeka zvakanyanya kupfuura mazhinji.
-Rank 5 (Yakadzika kwazvo): Aya masheya, seboka, ndiwo ane njodzi zvakanyanya uye haana kuchengetedzeka.
Masheya ane akachengetedzeka ematanho anowanzo kuve nekambani hombe dzemari dzinonzwika; Aya makambani akafanana anowanzove aine zvakadzikira pane avhareji yekukura tarisiro nekuti yavo yekutanga misika inowanzo kukura zvishoma kana kwete zvachose. Masheya ane mashoma ekuchengetedza masosi anowanzo sanganiswa nemakambani madiki uye / kana kusasimba pane avhareji mari; kune rimwe divi, aya makambani madiki dzimwe nguva ane pamusoro-avhareji tarisiro yekukura nekuti anotanga nemari yepasi nemari yepasi.
Yakabatanidzwa nenguva dzehupfumi
Kudzivirirwa kwakakosha zvakanyanya munguva dzehupfumi hwekutengesa pamusika, apo varimi vazhinji vanoda kuyedza kudzikisira kurasikirwa kwavo. Semuchiitiko chemukana, rekodhi rekuchengetedza pamusoro pemakore rinoshamisa. Kana iyo data ikaverengerwa, zvinoonekwa kuti masheya ane akakwirira Ekuchengetedza masosi kazhinji anowira pasi peiyo musika izere kana mitengo yemasheya inodonha. Iyo tafura iripedyo inoratidza maitiro eSecurity mabhendi akaitwa mune ese makuru misika kuderera pakati pa1966 nanhasi.
Chidzidzo chacho chakajeka. Kana iwe uchifunga kuti musika wakanangiswa pazasi, asi ukasarudza kubata zvakazara mari nzvimbo munzvimbo, tarisa paRank 1 kana 2 Kuchengetedzwa kwemasheya. Zvakare, panguva imwe chete, edza kuchengeta yako portfolio yakakwira sezvinobvira kune Mukana. Iwe unogona kusakwanisa kuwana masheya ane chinzvimbo chepamusoro muzviitiko zvese izvi. Ipapo iwe unofanirwa kusarudza kuti chii chakanyanya kukosha: kuita kwemitengo mumwedzi mitanhatu kusvika kugumi nemiviri, kana kuchengetedzeka. Chibvumirano chinosanganisira kusarudza masheya akayerwa 12 kana 1 kuti ubate nguva uye 2 kana 1 yekuchengetedza zvinogona kukoshesa kufunga.
Muzviitiko zvese, zvakafanira kusimbisa chokwadi chinoshamisa chekuti iyo inonzi Value Line zvakasarudzika yemasheya chiuru nemazana manomwe inomiririra angangoita 1.700% yemusika wemari yezvivakwa zvese zvinotengeswa kuUnited States stock exchange. Seimwe yesarudzo dzekudyara, semuenzaniso, mune yakasarudzika indekisi yemari munyika medu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iyo Ibex 35 inosvika riini iyo 8000 poindi nhanho?
Inguva refu-dhipoziti yakakosha here?
Maitiro emari dzakasiyana dzemari panguva yedambudziko